Bitcoin Bonanza - Kuvanzika
Tinokutendai nekushanyira webhusaiti yedu (iyo "Webhusaiti") yawakawana chinongedzo kune yedu Yakavanzika Policy (iyo "Yakavanzika Policy"). Webhusaiti inzvimbo Yedu (inonzi pamwe chete se "isu", "vedu" kana "isu") uye unogona kutibata chero nguva kuburikidza neemail pa: [email protected]
Isu tine hanya nekuchengetedza kuvanzika kwechero ruzivo rwemunhu rwaungasarudza kutipa ("Personal Information"), uye takazvipira kupa nharaunda yakachengeteka, ine mutoro uye yakachengeteka. Icho chinangwa chedu kuona kuti kushandiswa kweRuzivo Rwako kunoenderana neGeneral Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR"). Nekudaro, isu takapa mutemo uyu kukuzivisa iwe nezve mashandisiro atinoita Ruzivo Rwako
“Iwe” zvinoreva mushandisi ari kushandisa masevhisi edu.
"Personal Data" zvinoreva ruzivo rwunonyatso ratidza munhu kana kuti rwakabatana neruzivo rwunozivisa munhu chaiye.
"Mushanyi" zvinoreva munhu asiri mushandisi, anoshandisa nzvimbo yeruzhinji, asi asina mukana wekuenda kunzvimbo dzakarambidzwa dzeSaiti kana Sevhisi.
Nheyo: Iyi mutemo yakavakirwa pane anotevera ekudzivirira data misimboti:
Kugadziriswa kwedata remunhu kuchaitika nenzira yepamutemo, yakanaka uye yakajeka;
Kuunganidzwa kwedata remunhu kuchaitwa chete kune zvakatsanangurwa, zvakajeka uye zviri pamutemo zvinangwa uye kwete zvakare kugadziridzwa nenzira isingaenderane nezvinangwa izvozvo;
Kuunganidzwa kwedata rako pachako kuchave kwakaringana, kwakakodzera uye kunogumira kune izvo zvinodiwa maererano nechinangwa chavanenge vachigadziriswa; Iyo data yemunhu ichave yakarurama uye pazvinenge zvichidikanwa, inochengetedzwa kusvika parizvino;
Yese nhanho inonzwisisika ichatorwa kuve nechokwadi chekuti data rako pachako iro risina kurongeka richitariswa nezvinangwa zvazvinogadziriswa, zvinodzimwa kana kugadziriswa pasina kunonoka;
Yako data ichachengetwa mune fomu inobvumidza kuzivikanwa kweiyo data data kwete kwenguva yakareba kupfuura iyo inodiwa kune chinangwa icho wega data rinogadziriswa;
Yese data yemunhu ichachengetwa yakavanzika uye kuchengetwa nenzira inovimbisa kuchengetedzwa kwakakodzera;
Yemunhu data haigovaniswe nevechitatu mapato kunze kwekunge pazvinenge zvichidikanwa kuitira kuti vape masevhisi pachibvumirano;
Zvidzidzo zvedata zvichave nekodzero yekukumbira kupinda nekugadzirisa kana kudzima data rako pachako, kana kurambidzwa kugadzirisa, kana kuramba kugadzirisa pamwe nekodzero yekutakurika kwedata.
Sechikamu chekukupa iwe neSevhisi, isu tinotora Ruzivo Rwako Pakunyoresa account.
"Ruzivo Rwako" zvinoreva chero ruzivo rwaunogona kuzivikanwa kubva kwauri iwe pachako
(a) isu tinogona kuunganidza, kuchengeta uye kushandisa ruzivo nezve komputa yako, nharembozha kana chimwe chinhu chehardware chaunowana nacho iyo Webhusaiti uye kushanya kwako nekushandisa Webhusaiti (kusanganisira pasina muganhuriro yako IP kero, nzvimbo, browser/ rudzi rwepuratifomu uye vhezheni, Internet Service Provider, sisitimu yekushandisa, tsime rekutumira/mapeji ekubuda, kureba kwekushanya, mapeji ekuona, kufambisa webhusaiti uye mazwi ekutsvaga aunoshandisa;
(b) kusvika padanho ratinounganidza nekugadzirisa zvinyorwa tichimiririra makambani edu ari kupa kuti avabatsire kutevedzera zvinodiwa nemutemo zvakasiyana zvinosanganisira pasina muganho kurwisa mari, maitiro eKYC, tinogona kutora kopi yepasipoti yako, director uye shareholder. ruzivo, rezinesi rekutyaira uye humbowo hwehumbowo hwekero. Mapepa aya ane zvinhu zvakasiyana-siyana zveruzivo rwemunhu nerwekambani.(c) unogona kupihwa mikana yekutipa rumwe ruzivo nguva nenguva;(d) paunosarudza kunyoresa kushumiro yedu, uye/kana kutibata neemail, runhare kana kuburikidza nechero fomu rekuonana rinopihwa paWebhusaiti, tinogona kukukumbira kuti upe rumwe kana ruzivo rwese runotevera:
(i) zita rako (zita nerekupedzisira);
(ii) kero yako;
(iii) IP kero yako;
(iv) email kero yako;
(v) nhamba yako yefoni; uye/kana
(vi) ruzivo nezve chiyero chako uye/kana chimiro chekutengesa;
(vii) ruzivo rwekutsvaga kupi kunoitwa newe uye/kana chero kutengeserana kunoitwa newe nemumwe wako.
Haasi ruzivo rwese rwemunhu rwatinobata pamusoro pako ruchauya kubva kwauri nguva dzose. Isu tinogona zvakare kuunganidza ruzivo kubva kune vechitatu mapato akadai sevatinoshanda navo, vanopa masevhisi uye mawebhusaiti anowanikwa pachena (kureva social media mapuratifomu), kutevedzera zvisungo zvedu zvemutemo uye zvekutonga, kupa masevhisi atinofunga kuti angangofarirwa, kutibatsira kuchengetedza data rakarurama. uye kupa nekusimudzira maSevhisi
Mashandisiro atichaita Yako Ruzivo Rwako Tichagadzirisa Ruzivo Rwako zvinoenderana neGDPR uye kukupa iwe masevhisi. Isu tichagadzirisa Ruzivo Rwako Pachedu kuti tikwanise ku:
(a) kukupa masevhisi edu kwauri;
(b) kubatsira makambani echitatu kukupa masevhisi avo kwauri;
(c) kukugonesa kushandisa masevhisi edu;
(d) kukutumira kwakakodzera uye kwakanangwa kushambadzira kutaurirana;
(e) kukuzivisa iwe nezve shanduko yatakaita kana kuronga kuita kune Webhusaiti uye/kana masevhisi edu;
(f) kukutumira maemail sezvinodiwa;
(j) kuongorora nekuvandudza masevhisi anopihwa paWebhusaiti yedu.
Kana chero nguva iwe uchida kuti tirege kugadzirisa Ruzivo Rwako Pachedu nekuda kwezvinangwa zviri pamusoro, saka unofanirwa kutibata ne-e-mail uye isu tichatora matanho akakodzera kuti tirege kuita kudaro.
Ndapota cherechedza kuti izvi zvinogona kureva kuti Account yako ichavharwa. Kana zvinangwa zvekugadzirisa zvachinja, tinozokuzivisa nekukasika uye totsvaga imwe mvumo ingangodiwa.
Kuburitsa Ruzivo Rwako Chako
Kunze sekutsanangurwa kwazvinoitwa muPolisi iyi, isu hatizoburitse nemaune Iyo Yega Dhata yatinounganidza kana kuchengeta paSevhisi kune vechitatu mapato pasina mvumo yako yepakutanga. Tinogona kuzivisa ruzivo kune vechitatu mapato mumamiriro anotevera:
Kunze kwekusvika pachiyero chinodiwa nemutemo chero upi zvawo unoshanda kana dare rehurumende kana rinotonga, tichangozivisa zvakadaro zveruzivo rwako kumakambani edu echitatu sezvinodiwa kuti isu kana ivo vakuitire isu kana masevhisi avo kwauri.Tichashandisa zvese zvine musoro kuyedza kuona kuti chero makambani atinozivisa ruzivo rwako anoenderana neData Dziviriro Act 1998 (kana mwero wakaenzana) maererano nekushandiswa uye kuchengetedza ruzivo rwako pachako.Kana tichitengesa kana kutenga chero bhizinesi kana midziyo. , tinogona kuburitsa data rako pachako uye data rekutengesa kune angangove mutengesi kana mutengi webhizinesi rakadaro kana zvinhu. Kana zvinhu zvedu zvese zvakatorwa nemunhu wechitatu, data remunhu uye data rekutengesa rakabatwa nayo nezvevatengi varo richava chimwe chezvinhu zvakatamiswa. Tichazivisa ruzivo rwako kana isu tiri pasi pebasa rekuzivisa kana kugovera yako pachako. dhata uye data rekutengesa kuitira kutevedzera chero chisungo chepamutemo, kana kuti kumanikidza kana kushandisa yedu Mitemo neMamiriro uye zvimwe zvibvumirano; kana kuchengetedza kodzero, midziyo, kuchengeteka kwedu, vatengi vedu, kana vamwe. Izvi zvinosanganisira kupanana ruzivo nemamwe makambani nemasangano nechinangwa chekudzivirira hutsotsi uye kuderedza njodzi yechikwereti. Kana chero nguva iwe uchida kuti tirege kugadzira Ruzivo Rwako Pachedu nekuda kwezvinangwa zviri pamusoro, saka unofanirwa kutibata uye isu tichatora matanho akakodzera. kurega kudaro. Ndokumbira utarise kuti izvi zvinogona kureva kuti Akaunti yako ichavharwa
Data Chidzidzo Kodzero
Isu tinoremekedza kodzero dzako dzekuvanzika uye tinokupa iwe kuwana zvine musoro kune Yako Data yaungave wakapa kuburikidza nekushandisa kwako masevhisi. Kodzero dzako huru pasi peGDPR ndedzinotevera:
A. kodzero yeruzivo;
B. kodzero yekuwana;
C. kodzero yekugadzirisa;
D. kodzero yekudzima; kodzero yekukanganwa;
E. kodzero yekurambidza kugadzirisa;
F. kodzero yekupikisa kugadziriswa;
G. kodzero yekutakurika kwedata;
H. kodzero yekunyunyuta kune ane masimba; uye
I. kodzero yekubvisa mvumo.
Kana iwe uchida kuwana kana kugadzirisa chero imwe Yega Yega data yatinayo nezvako, kana kukumbira kuti tibvise chero ruzivo nezvewe, unogona kutibata nekutumira email. Tichabvuma chikumbiro chako mukati memaawa makumi manomwe nemaviri (72) uye tochigadzirisa nekukasika. Isu tichapindura kune izvi zvikumbiro mukati memwedzi, paine mukana wekuwedzera nguva iyi kune zvakanyanya kuomarara zvikumbiro zvinoenderana neInoshanda Mutemo.
Tichachengeta ruzivo rwako kwenguva yakareba kana account yako ichishanda, sezvinodiwa kukupa masevhisi, kana kutevedzera zvatinosungirwa zviri pamutemo, kugadzirisa kusawirirana uye kusimbisa zvibvumirano zvedu.
Unogona kugadzirisa, kugadzirisa, kana kudzima ruzivo rweAkaundi yako uye zvaunofarira chero nguva nekuwana Akaunti yako. Ndokumbira utarise kuti kunyangwe shanduko dzese dzauchaita dzichiratidzwa mudura revashandisi nekukasira kana mukati menguva yakafanira yenguva, tinogona kuchengetedza ruzivo rwese rwaunotumira kuti uchengetedze, uchengetedze, udzivise hutsotsi nekushungurudzwa, analytics, kugutsikana kwezvisungo zvemutemo, kana apo isu tinotenda neimwe nzira zvine musoro kuti tine chikonzero chakanaka chekuita kudaro.Unogona kuramba kugovana nesu Personal Data nesu, nokudaro isu tingatadza kukupa zvimwe kana zvese zvezvimiro nemashandiro eSevhisi. Chero nguva, unogona kupokana nekugadziriswa kweData Yako, nezvikonzero zviri pamutemo, kunze kwekunge zvichibvumidzwa nemutemo unoshanda. Maererano neMutemo Unoshanda, tinochengetera kodzero yekunyima dhata remunhu kana kuzviburitsa kungakanganisa kodzero uye rusununguko rwevamwe.Tinogona kushandisa data rako pachako nechinangwa chekuita sarudzo paunenge uchiratidza zvaunoita uye zvinopihwa zvinoenderana nezvako uye zvaunofarira.
Kana kugadzirisa kwakadaro kuchiitika, tichakumbira mvumo yako yakajeka uye tokupa sarudzo yekubuda. Isu tinogona zvakare kushandisa otomatiki kuita sarudzo kuti tizadzise zvisungo zvakatemerwa nemutemo, apo isu tichakuzivisa iwe nezve chero kugadzirisa kwakadaro. Une kodzero yekupokana nekugadziriswa kwedata rako pachako nekuda kwezvinangwa chero nguva nekutibata nesu kuburikidza nee-mail.
Kushambadzira uye Kushandisa Cookies
Isu tinounganidza ruzivo rwebrowser uye cookie paunotanga kuenda kumawebhusaiti edu. Isu tinoshandisa makuki kukupa iwe zvirinani mutengi ruzivo uye yekushandisa kuwana. Mamwe makuki anokubvumidza kuti ubve uye upindezve mawebhusaiti edu pasina kuisa zvakare password yako. Izvi zvichatariswa newebhu server.Kuwana rumwe ruzivo nezve mashandisiro emakuki, mashandisiro aungaite mashandisiro awo, uye ruzivo rwunechekuita nekushambadzira kwedu kweinternet uye kunharembozha, ndapota tarisai mutemo wecookie yedu kuti uwane rumwe ruzivo. KuvanzikaKuchengetedza kuvanzika kwevadiki kwakakosha. Basa redu harina kutungamirirwa kuvana vari pasi pemakore 18, uye isu hatizivi kuunganidza Personal Data kubva kuvana vari pasi pemakore 18. Kana iwe uri pasi pemakore gumi nemasere, saka ndapota usashandise kana kuwana Service chero nguva. kana neimwe nzira. Kana tikadzidza kuti Personal Data yakaunganidzwa paSevhisi kubva kuvanhu vari pasi pemakore gumi nemasere, saka tichatora matanho akakodzera ekudzima ruzivo urwu. Kana iwe uri mubereki kana muchengeti uye ukaona kuti mwana wako ari pasi pemakore gumi nemasere awana Akaundi paSevhisi, saka unogona kutizivisa kuburikidza ne-e-mail uye nekukumbira kuti tidzime data remwana wako kubva kumasystem edu.
Isu tinotora matanho akakodzera ekuchengetedza kuchengetedza kubva pakurasikirwa, kushandiswa zvisizvo uye kupinda zvisina mvumo, kushandurwa, kuburitswa, kana kuparadzwa kweruzivo rwako. Takatora matanho ekuona kuti kuvanzika kuri kuitika, kutendeseka, kuwanikwa, nekusimba kwehurongwa nesevhisi kugadzirisa ruzivo rwemunhu, uye tichadzoreredza kuwanikwa uye kuwana ruzivo panguva yakakodzera kana chiitiko chemuviri kana chehunyanzvi.Hapana nzira ye kutapurirana neInternet, kana nzira yekuchengetedza zvemagetsi, yakachengeteka 100%. Hatigone kuve nechokwadi kana kuvimbisa kuchengetedzwa kwechero ruzivo rwaunotumira kwatiri kana kuchengeta paSevhisi, uye unozviita nenjodzi yako wega. Isu hatigonewo kuvimbisa kuti ruzivo rwakadaro harugone kuwanikwa, kuburitswa, kusandurwa, kana kuparadzwa nekutyorwa kwedziviriro yedu yepanyama, yehunyanzvi, kana yesangano chengetedzo. Kana iwe uchitenda kuti yako Personal Data yakakanganiswa, tapota taura nesu kuburikidza ne-e-mail. Kana tikaziva nezvekutyorwa kwekuchengetedza masisitimu, tinokuzivisa nezvekuitika kwekutyorwa kwayo zvinoenderana nemutemo unoshanda.
Kunyangwe isu tingakubvumidza kuti ugadzirise yako kuvanzika marongero kuti udzikisire kuwana kune imwe Yemunhu Data, ndapota ziva kuti hapana matanho ekuchengetedza akakwana kana asingapindike. Pamusoro pezvo, hatigone kudzora zviito zvevamwe vashandisi vaungasarudza kugovera ruzivo rwako navo. Hatigone uye hativimbise kuti ruzivo rwaunotumira pairi kana kutumira kuSevhisi hauzoonekwa nevanhu vasina mvumo. Takatora nhanho dzinodiwa kuchengetedza ruzivo rwako rwemunhu zvakanyanya sezvinobvira mukufamba nekushandisa tekinoroji uye manejimendi chengetedzo kudzikisa njodzi dzekurasikirwa, kushandiswa zvisizvo, kuwana kusingatenderwe, kuburitsa uye kuchinjwa kwedata rako. Dzimwe dzedziviriro dzatinoshandisa mafirewall uye encryption yakasimba kwazvo inosanganisira: 3 level ye encryption, zvidzoreso zvekupinda kwemuviri pane yega yega network, uye ruzivo rwekubvumidza zvidzoreso. Kudzivirirwa kwakadaro kunowanikwa nekushandisa: dhatabhesi encryption aes-256 algorithms, yemuviri yekuwana zvidzoreso (PAC), uye ruzivo rwekubvumidza zvidzoreso.
Kuchengetwa kweData uye International Transfers
Mashoko atinounganidza kubva kwauri anogona kuendeswa, ochengetwa, kune imwe nzvimbo iri kunze kweEuropean Economic Area (“EEA”). Inogonawo kugadziriswa nevashandi vanoshanda kunze kweEEA vanotishandira kana kune mumwe wevatigovera. Nekutumira data rako pachako, unobvumirana nekuchinjisa uku, kuchengeta kana kugadzirisa. Tichatora matanho ese anodiwa kuti tive nechokwadi chekuti data rako rabatwa zvakachengeteka uye zvinoenderana neiyi mutemo wekuvanzika.
Ruzivo rwese rwaunotipa rwakachengetwa pamaseva edu akachengeteka.Zvinosuruvarisa, kufambiswa kwemashoko kuburikidza neinternet hakuna kuchengetedzeka zvachose. Kunyangwe isu tichaita zvatinogona kuchengetedza data rako pachako, isu hatigone kuvimbisa chengetedzo yedata rako rinofambiswa kuburikidza neWebhusaiti yedu; chero kutapurirana kuri panjodzi yako wega. Kana tangowana ruzivo rwako, tichashandisa nzira dzakasimba uye maitiro edziviriro kuedza kudzivirira kupinda zvisina mvumo. Isu tinotumira ruzivo rwemunhu tichishandisa software yakachengeteka iyo encryption ruzivo rwaunoisa. Kupfuurirazve, kusvika patinotora chero kadhi rechikwereti kana ruzivo rweakaundi yebhangi kubva kwauri, isu tinongoratidzira mana ekupedzisira manhamba enhamba yekadhi rako rechikwereti kana uchisimbisa odha. Isu tinochengetedza kuchengetedzwa kwemuviri, zvemagetsi uye zvemaitiro zvine chekuita nekuunganidza, kuchengetedza uye kuburitswa kweruzivo rwemutengi wega wega. Maitiro edu ekuchengetedza anoreva kuti tinogona kukumbira humbowo hwekuzivikanwa tisati tazivisa ruzivo rwemunhu kwauri
Data Dziviriro Officer